Daawo sawiro: dhaqdhaqaaqa isgoyska Zoope oo dib u soo laabtay mudo
Amassive bomb attack in a busy area of the Somali capital Mogadishu on Saturday is now known to have killed dozens, police say.
Isgooska Zoobe 14kii bishan oo ku beegneed maalin sabti ah waxaa ka dhacay qaraxii ugu xooga iyo khasaaraha badnaa ee ka dhaca Soomaaliya, waxaana qaraxan noloshooda ku waayay boqolaal qof.
Qaraxa ka dhacay Isgooska Zoobe ayaa loo adeegsaday gaari xamuul ah oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa, waxaana ku nafwaaay qaraxaasi dad ku dhaw 400-qof oo shacab ah.
Musiibada ka dhacday Isgooska Zoobe ayaa noqotay mid aan wali ka go’in quluubta umada Soomaaliyeed, waxaana wali halkaasi laga dareemayaa saameynta dhibaatadii dhacday.
Mudo Isbuuc ah waxaa Isgooska Zoobe ka socday baadi goobka dadkii ku dhintay qaraxaasi iyo waliba nadiifinta bur burkii ka dhashay qaraxa, waxaana gabi ahaan bur buray dhismayaashii iyo goobihii ganacsi ee Isgooska ku yaalay.
Waxaa maanta Mudo isbuuc kadib dib u furmay isku socodka dadka iyo Gaadiidka Isgooska Zoobe, waxaana qof kasta oo halkaasi mara uu dareemayaa xanuunka musiibadii isbuuc kahor halkaasi ka dhacday.
Dib u dhis ayaa ka bilowqday meelaha qaar Isgooska Zoobe, waxaana la filayaa in dhawaan noloshii ka jirtay Isgooskaasi oo hada loo bixiyay 14-ka October uu kusoo noqdo si caadi ah lana dhiso dhismooyinkii bur buray.
Dhalinyaro isku hilqaantay isku keenida dhalinta Soomaaliyeed oo Muqdisho ….
United Nations Calls For Inclusive Election In Somalia